Google AdWords vs. SEO: Inona no tsara kokoa?
Ny valiny dia miankina betsaka amin'ny toetran'ny raharaham-barotrao. Alohan'ny famakafakana hoe iza amin'ireo fantsona ara-barotra no tsara kokoa ho an'ny fahamendrehana sy ny fifamoivoizana eo amin'ny orinasa iray - SEO na Google AdWords, aleo aloha hamaritra ireto teny manaraka ireto. Izany dia hanampy anao hahazo fahatakarana tsara kokoa izay mety hanatsara ny fivarotana anao - daigle law firm louisiana.
Inona ny fahasamihafana eo amin'i Google AdWords sy SEO?
Fanadiovana ny môtera fikarohana dia fomba iray amin'ny paikady sy tetika ampiasaina hampitomboana ny isan'ny mpitsidika amin'ny tranokala iray. SEO dia mampiasa teknika izay natao hampivoarana ny algorithm Google mba hahafahan'ny loharanon-karavan'ity olona ity hanana toerana ambony eo amin'ny motera fikarohana. Ireo fomba ireo dia ny fampiasana ireo teny manan-danja sarobidy, mampifandray amin'ny vohikala azo itokisana na ireo tranonkala hafa mifandraika amin'izany ary mampiasa ireo famaritana meta manan-danja.
Google AdWords kosa dia mampiasa ny dokam-barotra nomena. Amin'izany fomba izany, ny tompon'ny tranonkala dia mila mandoa milina fikarohana (na resaka Google, Yahoo na Bing) hametraka ny loharanon-karenany ao an-tampon'ny valin'ny fikarohana Google. Tsara homarihina fa tsy maintsy mandoa isaky ny mpampiasa iray mijery ny dokambarotra ny tompon'ny tranokala.
Ndao hifanaraka amin'ny Google AdWords sy SEO
Hanomboka amin'ny fampitahana vidiny. Ny zavatra goavam-be momba ny SEO dia ny fahafahana amin'ny voalohany satria tsy ilaina ny mandoa ny ankamaroan'ny fandaharana izay manampy anao amin'ny teknolojia SEO. Ny hany zavatra ilainao hatao dia ny mahafantatra hoe aiza no fomba tsara indrindra ampiasain'ny SEO ny loharanonao ary ampiharina izany.
Na izany aza, raha vao mitombo ny raharaham-barotra, dia mety tsy maintsy misafidy ireo sehatra SEO ianao, toy ny Semalt, mba hanatsarana bebe kokoa ny pejin-tranonkalanao mba hahafahanao mijanona ao anaty lalao ary handresy ny fifaninanana. Ireo orinasa izay miompana amin'ny seo SEO ary manana fomba fijery tsy miasa amin'ny sehatra iray mitovy taona maro dia afaka manome ny raharaham-barotra sy ny ezaka ilainy.
Ny Google AdWords dia manana karazana paikady momba ny karama. Amin'ny alalan'ity tetikasa ity, dia hanana teti-bola sasany izay handoavany isaky ny mpampiasa iray mividy ilay dokam-barotra. Noho izany, ny mpampiasa kokoa azonao, dia ny tsy maintsy handoavanao. Na dia mety ho sarotra aminao aza izany amin'ny voalohany, tsy mampitaha azy amin'ny fanontana sy ny famoahana ny gazetiboky.
Isaky ny mpijery sy mpitarika
Rehefa mijery ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola, dia mila jerena ny mety ho fitaratry ny fitarihana Google AdWords ary ny SEO afaka manome. Ireo fomba roa ireo dia afaka manome tarehimarika miavaka. Ny tombony amin'ny AdWords, amin'ity tranga ity, dia ny fahafahana mitarika bebe kokoa amin'ny fotoana fohy. Na izany aza, raha miaritra ela izahay, dia ho hitanareo fa hitarika bebe kokoa mankany amin'ny valin'ny fikarohana biolojika ny olona. Ny fanazavana tsotra momba ny zava-misy dia ny fikarohana biolojika no tadiavin'ny mpampiasa. Raha hamintina izany dia hanome baiko na mpitsidika anao avy hatrany ny AdWords, saingy tsy maharitra toy ny SEO izay ahafahanao mpijery kokoa noho ny fotoana voafaritra.
Ho an'ny hafainganam-pandeha, AdWords dia safidy tsara kokoa. Ho an'ny SEO dia mila fotoana kely ahafahan'ny mpampiasa mahita ny tranonkalanao amin'ny alàlan'ny valin'ny fikarohana biolojika. Ho an'ny AdWords anefa, mety hitarika avy hatrany ianao satria Google AdWords dia afaka mifantoka ny sainao voafidy. SEO dia tsy mikendry ny demografika. Ny SEO azonao atao dia ny manome antoka fa ny tranokalanao dia manan-danja ary hahita izany ny mpihaino tianao.
Inona no tokony hofidiako: Google AdWords na SEO?
Ankehitriny fa fantatrao ny tombontsoa avy amin'ny sehatry ny varotra tsirairay, mety ho mora kokoa aminao ny mamantatra hoe inona no tsara kokoa ho an'ny raharaham-barotra. Raha miezaka mamorona lohataona haingana ianao, dia ny AdWords no safidy tonga lafatra ho anao. Na izany aza, raha tianareo ny fivarotana ny orinasanao, dia tokony hampiasa ny teknolojia SEO ianao. Fanamarihana, satria samy mahasoa avokoa ireo fantsom-pivarotana roa ireo raha mbola eo am-pametrahana ny mombamomba ny endri-pahaizanao ianao ary manohy mandrefy ny fahombiazan'ny channel marketing tsirairay.